ETAT D’URGENCE ALIMANTAIRE – Madatopinfo
ETAT D’URGENCE ALIMANTAIRE
Efa ampy PPN mandritra ny 15 andro kosa ny 100.000 ariary avy amin’ny Fitondram-pajakana. Mila mihidy aman-trano tanteraka amin’izay fa ahiana hiampy ny andro tsy ivoahana ny trano raha ny fivezivezena be loatra eto Andrenivohitra no tazanina. Mbola samy ho sahirana vokatr’izany ny Mpitondra sy ny vahoaka entina, indrindra « loza », hoy ny fitenin-d-Ravalomanana, Filoha teo aloha raha sanatria mihitatra ity aretina mpandripaka ity. Mila voafehy mialoha ny ririnina ity valan’aretina ity, ary efa tsikaritra miha mangatsiaka ny andro izay mampihombo ny coronavirus. Ny www.madatopinfo.com sy www.gazette-madagascar.com dia mankasitraka ireo manaraka ny fandaminana avy amin’ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina amin’ny 8 ora alina sy ny toromarika amin’ny haino aman-jery miara-manonja manomboka amin’ny 1ora tolakandro izay eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Serasera iandraketan’ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy.
FITSINJOVANA NY OLONA MAREFO MANOKANA HATAON’NY FANJAKANA MANOMBOKA NY ALAKAMISY HO AVY IZAO :
– MPAMILY FITATERAMBAHOAKA SY NY MPANAMPY AZY
– NY MPAMILY FIARA KARETSAKA
– NY MPANASA LAMBA
– NY BE ANTITRA
– NY MPIVAROTENA
– NY FAKTIORA NY JIRAMA HISY FEPETRA MANOKANA
– NY FINDRAMANBOLA ENY AMINY BANKY HISY FAMPIRESAHANA MANOKANA
– MISY VOLA HO ZARAINA HO AN’I OLONA TRATRAN’I OLANA REHETRA NOHO NY CORONAVIRUS
– NY HETRA HALOAN’I ORINASA TSY MIANKINA MBA HIAROVANA NY ASA
– MITOHY NY VARY MORA
ORINASA STAR: Namoaka « application mobile STARnaka »
MADAJEUNE: Sekoly ambony manodidina ny 40 no mandray anjara etsy Mahamasina
MINISTERAN’NY VAROTRA: Hatomboka ny 1 Desambra ho avy izao ny « opération vidin’entana »
Aller en haut Ecrire un commentaire
Aucun commentaire sur cet article!